राजिनामा पत्र : डा. अधिकारी माथि नै ‘ब्याक फायर’? – Nepali Health
राजिनामा पत्र : डा. अधिकारी माथि नै ‘ब्याक फायर’?
२०७५ मंसिर ४ गते २१:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ४ मंसिर । आक्रामक शब्द प्रयोग गरी लेखिएका राजिनामा पत्र बुझाएर एकाएक चर्चित बनेका न्युरो सर्जन प्राडा ध्रुबराज अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ती पछि भने रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् ।
राजिनामा पत्रकै कारण दिउसोसम्म ‘वाह वाही’ पाएका अधिकारीलाई मन्त्रालयको विज्ञप्ती पछि कानुन (स्वास्थ्य सेवा ऐन) नमान्ने डाक्टर भन्न थालेका छन् ।
डा अधिकारीले सोमबार उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बुझाएको राजिनामा पत्रको विषयमा नै ‘चाकडी र घुसको रकम पुर्याउन नसकेकोले राजिनामा’ भन्ने उल्लेख थियो ।
सो राजिनामा पत्र सार्वजनिक भएसंगै डा अधिकारी एकाएक चर्चित बनेका थिए । उनको पत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको बेथिति र बिकृति उदांगो भएको भनिएको थियो । तर त्यो चर्चा २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन जब मन्त्रालयले विज्ञप्ती सार्वजनिक गरयो ।
विज्ञप्तीका अनुसार गतवर्ष नवौँ तहमा बढुवा भएपछि अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पदस्थापन गरेको थियो । तर अधिकारी पोखरा एक दिन पनि नगई वीरमै काजमा रहेर काम गरेका थिए ।
विज्ञप्तीमा स्वास्थ्य सेवा ऐनले बढुवा पछिको पदस्थापन भएको ठाँउमा एक पटक पनि हाजिर नभई सरुवा गर्न नमिल्ने र प्राडा अधिकारीलाई सो बारेमा पटक पटक जानकारी गराउँदा अवज्ञा गरेको उल्लेख छ ।
ऐन नै नमानी आफ्नै अडानमा बस्नुले डा अधिकारीको समेत उत्तिकै गल्ती भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसो त डा अधिकारी उमेर हदका कारण आगामी २० फागुन अर्थात डेढ महिना पछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेको निजामती किताव खानाको विवरणमा उल्लेख छ ।
कडा शव्दमा राजिनामा पत्र लेखेको भन्दै हिजो बेलुका देखि नै चर्चा बटुलेका डा अधिकारीलाई आज अपरान्ह मन्त्रालयको पत्रले व्याक फायर गरेको छ ।
कृषि राज्यमन्त्री चौधरीको घुँडाको शल्यक्रिया राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा
नर्स विहीन बन्यो हुम्ला जिल्ला अस्पताल !